निर्वाचन आयोगले पहिलोपटक लिएन वैदेशिक अनुदान, विगतमा कहाँबाट कति सहयोग ? « Naya Page
निर्वाचन आयोगले पहिलोपटक लिएन वैदेशिक अनुदान, विगतमा कहाँबाट कति सहयोग ?
काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले पहिलोपटक विदेशी अनुदानविना नै निर्वाचन सामग्री जुटाएको छ । ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनपछि निरन्तर वैदेशिक सहायतामा निर्वाचन सामग्री प्राप्त हुँदै आएको थियो । आयोगले अति संवेदनशील र संवेदनशील निर्वाचन सामग्री विदेशीबाट नलिने सैद्धान्तिक सहमति गरेर प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विदेशी दातृनिकाय र नियोगबाट अनुदान नलिएको हो । आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउने सकिने निर्वाचन सामग्रीमा वैदेशिक सहायता नलिने आयोगको सैद्धान्तिक सहमतिपछि आफैले खरिद गरेको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए ।
निर्वाचन सामग्री खरिद गर्न करिब चार अर्ब
आयोगले आवश्यक निर्वाचन सामग्री खरिद गर्न करिब चार अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आयोगलाई सरकारले १० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा सरकारले उपलब्ध गराएको करिब १० अर्बमध्ये ६ अर्ब खर्च भएको थियो भने बाँकी रकम सरकारलाई फिर्ता गरेको थियो । आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा लाग्ने खर्चबारे यकिन तथ्यांक भने निकाल्न सकेको छैन । एउटै शीर्षकमा धेरै सामान खरिद गरिने भएकाले छुट्टाछुट्टै हिसाबकिताब गर्न बाँकी छ । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्रै छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा भएको खर्चको यकिन विवरण आउने प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए ।
टेन्डर आह्वान गरी निर्वाचन सामग्री खरिद
निर्वाचन आयोगले टेन्डरमार्पmत निर्वाचन सामग्री खरिद गरेको हो । आयोगका अनुसार ६७ प्रकारका सामग्रीमध्ये १७ प्रकारका निर्वाचन सामग्री स्थानीयस्तरमै खरिद हुनेछ । स्थानीयस्तरमा कपडा, डोरी, सियो, धागो, खाम, विभिन्न रेकर्ड फाइल, मैनबत्ती, कलमलगायत सामग्री खरिद गरिनेछ । ती सामग्री मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले खरिद गर्छ । तर, आयोगले क्यालकुलेटर, पन्चिङ मेसिन, कैँची, रबर म्याट, जेलपेन, स्केल, ग्लुस्टिक, स्ट्याम्प प्याड, स्ट्याम प्याड मसी, टेबल घडी, छेकाबारलगायत सामग्री टेन्डरमार्फत खरिद गरेको छ ।
त्यसरी खरिद गरिएका सामग्रीमा स्थानीय तहका लागि आवश्यक संख्यामा फरक नपरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । स्थानीय तहको भन्दा करिब एक हजार मतदान केन्द्र थप भएकाले स्थानीय तहका आवश्यक निर्वाचन सामग्रीमा थप गर्नुनपरेको आयोगका कर्मचारीको भनाइ छ । आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा अपुग २५ हजार मतपेटिका खरिद गरेको छ । विगतमा चीन र भारतले अनुदान दिने निर्वाचन सामग्री नेपाललाई दिइने वार्षिक अनुदान रकममध्येबाट उपलब्ध गराइँदै आएको थियो ।
संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्र सञ्चालनमा अमेरिकी सहयोग नियोग, आइएफइएस, डिफिड, डानिडा, जाइका, कोइका, डेनिस दूतावास र अमेरिकी सरकारले सहयोग गरेका थिए । केन्द्रले निर्वाचनसम्बन्धी सूचना एकीकृत गर्दथ्यो । तर, ०७४ को स्थानीय निर्वाचन र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन यो केन्द्र आइएनजिओको सहायताविनै सञ्चालनमा छ ।
०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी विदेशी सहायता लिएको देखिन्छ । माओेवादी सशस्त्र युद्ध शान्ति–प्रक्रियामा ओर्लिएपछि भएको निर्वाचनमा विदेशी नियोग र आइएनजिआको प्रभाव पनि धेरै थियो । त्यतिवेला आयोगले आइएनजिओ, दातृनिकाय र नियोगहरूबाट हेभी प्रिन्टर, मल्टी फङसन प्रिन्टर, सर्भर, नोकिया मोबाइल सेट, विभिन्न मोडलका गाडी लिएको थियो । आयोगले केही हजारमा खरिद गर्न सकिने डिजिटल क्यामेरा, भिडियो क्यामरा, विभिन्न किसिमका जेनेरेटर, सोलार सिस्टम, सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सामग्री पनि सहायता लिएको थियो । प्लास्टिक मतपेटिका, मतपेटिकामा लगाउने सुरक्षण सिल पनि दातासँग मागिएको थियो । यी निर्वाचन सामग्री करिब १९ करोड रुपैयाँबराबर थियो । त्यतिवेला भारतबाट आठ सयवटा विद्युतीय मतदानयन्त्र मागेर ल्याइएको थियो ।